विदेश जाने क्रम ठप्प हुँदा पनि कसरी बढ्यो रेमटि्यान्स ? — Sanchar Kendra
राष्ट्र बैंकका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ८० प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १.३ प्रतिशतले घटेको थियो । यो अवधिमा विदेश जानेको संख्या घटेपनि रेमिट्यान्सले भने उछाल हानेको छ ।
तर, गत वर्ष ८ खर्ब ७५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल आएको थियो । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । चैतमा नेपालमा लकडाउन भएपछि रेमिट्यान्स आप्रवाह नसुस्ताएको हैन । गत वैशाखमा ५३ अर्बमात्रै रेमिट्यान्स आएको अवस्थामा जेठमा ९४ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । असारमा त्यो क्रम बढेर १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो  ।
फेरि घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
भीमदत्तको कार्यपालिकाबाट गरियो मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालनमा साझेदारीको निर्णय, १५ प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विद्युतीय माध्यमवाट भुक्तानी सेवा शुरु
नेपाल टेलिकमका सिम प्रयोगकर्तालाई दशैँ-तिहारमा सुबिधै-सुबिधा, ल्यायाे समर र फेस्टिभल अफर